Dowladda Baxreyn oo ka hadashay qarixii Ismiidaanta ahaa ee ka dhacay Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda Baxreyn oo ka hadashay qarixii Ismiidaanta ahaa ee ka dhacay Muqdisho
Dowladda Baxreyn oo ka hadashay qarixii Ismiidaanta ahaa ee ka dhacay Muqdisho
Dowladda Baxreyn oo kamid ah dowladaha Carbeed ayaa si kulul u cambaareysay qarixii ismiidaaminta ahaa ee Sabtidii todobadkaan ka dhacay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, kaas oo geystay dhimasho iyo dhaawac.
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibedda Dowladda Baxreyn ayaa waxaa sidoo kale lagu sheeegay in weerarkaas uu ahaa mid argagaxiso, isla markaana ay aad uga xun yihiin.
“ Wasaaradda arrimaha dibedda Baxreyn waxay tacsi u dirtay qoysaska dhibanayaasha iyo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo u rajeysay caafimaad deg deg ah kuwa ku dhaawacmay weerarkaan fuleynimada ah ee argagixiso ee ka hor imaanaya dhammaan qiyamka iyo mabaadi’da ayaa lagu yiri” Qoraalka.
Sidoo kale Wasaaradda ayaa sheegtay inay xaqiijisay midnimada Boqortooyada ee Soomaaliya dhammaan tallaabooyinka ay qaadayso ee lagula dagaallamayo ururada argagixisada ah iyo ilaalinta amniga iyo xasilloonida, iyadoo ku celisay mawqifka Bahrain ee diidmada dhammaan noocyada rabshadaha, xagjirnimada, iyo argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa qarixii ismiidaaminta ahaa ee todobaadkaan ka dhacay agagaarka Isgoyska Ex-koontorool Afrgooye ee Magalada Muqdsho waxaa ay sheegtay inay ku geeriyoodeen laba Ruux uu mid kamid ah yahay Ninkii is qarixiyay 23 kalena ay ku dhaawacmeen.